Qowmiyadda Roomerka oo diiwaangelin sharci-darro ah lagu sameeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Pontus Lundahl/Scanpix
Qowmiyadda Roomerka oo diiwaangelin sharci-darro ah lagu sameeyey
La daabacay söndag 22 september 2013 kl 09.59
Boliiska Iswiidhen ayaa diiwaangelin sharci-darro ah ku sameeyey kumanaan ka tirsan qowmiyadda Roomerka. Tirada dadkaas lagu sameeyey diiwaangelinta daba-galka ah ayaa lagu qiyaasay 4029 qof oo isugu jira carruurta iyo dad waaweyn. Carruurta diiwaangelinta lagu sameeyey waxay tiradoodu kor u dhaaftay 1000 ilmood.
Diiwaangelinta dadkaan Roomerka lagu sameeyey waxaa sabab looga dhigayaa in ay u dhasheen qowmiyaddaas Roomerka. Dad badan oo diiwaanka la geliyeyna weligood ma gelin wax dembi. Waxyaalaha dadkaan laga qorayna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaraabadooda.
– Waa wax aad u xun. Waana fal sharcidarro ah oo boliiska dalku galay. Waa wax mamnuuc ah in boliisku dadka ku diiwaangeliyo jinsiyadda ay asal ahaan ka soo jeedaan, laakiin waxaa muuqata in hay’aduhu sidaas sameeyaan. Arritaanina waa xadgudub weyn oo lagu sameeyey sharciga. Waana wax aan la qaadan karin, ayuu yiri Fred Taikon oo ah soosaaraha wargeyska È Romani Glinda.
Rosita Grönfors oo ah guddoomiyaha Ururweynaha qowmiyadda Roomerka iyo ururka dumarka geeddiga ah, ayaa wargeyska DN u sheegtay in ay ka argagaxday markii ay ogaatay falkaan boliisku sameeyey. Waxay kaloo sheegtay in uu falkaani wax dhimay kalsoonidii ay u haysey boliiska, iyo in su’aasha la is weyddiinayaa tahay sababta uu boliisku ugu sameeyey diiwaangelinta daba-galka ah qowmiyad laga tiro badan yahay oo ku nool Iswiidhen.
– Weli waxbaa qarsoon oo ma ogin inta sano oo uu boliisku falkaan soo sameynayey. Haddaba maxaa loo baahan yahay in la iftiimiyo? Aniga waxay ila tahay in fadeexo intaas ka weyn soo bixi doonto markii arrinta hoos loo gudagalo. Waxayna la mid tahay taariikho hore oo dib u soo noqdey.
Caalimiin aarimaha sharciga ku xeeldheer oo wargeysku waraystay waxay sheegeen in diiwaangelintaani ay jebineyso sharciyo badan oo ay ka mid yihiin sharciga macluumaadka boliiska iyo sharciga macluumaadka guud ee daba-gallada boliiska.
– Waa cabsi i gelisey oo aan ka argagaxay, ayuu yiri Erland Kaldaras Nikolizsson, hoggaamiyaha ururka dhallinyarada ee qowmiyadda Roomerka mar uu la hadlayey idaacadda P1-Morgon.
Dhanka kale Lars Förstell oo maareeyaha arrimaha warfaafinta ee boliiska gobolka Skåne ayaa idaacadda Ekot u sheegay in hadda la helay hab diiwaangelin oo u dhigma kan lagu soo bandhigay wargeyska Dagens Nyheter, laakiin aysan ciidamada boliisku dejin diiwaankaan, ee ay dhici karto in qof shakhsi ahi sameeyey.
– Waxaan diiwaanka boliiska ka dhex helnay hab dadka lagu diiwaangeliyo oo u muuqda habka Wargeyska DN lagu sharraxay, laakiin ma aha boliiska cidda diiwaangelintaan samaysey. Baaritaan ayaan ku samayn doonaa cidda ka dambeysey diiwaangelintaas, ayuu yiri Lars Förstell.
Fayl uu boliisku ka helay diiwaankaas waxaa la qoray sannadkii 2012, balse waxaa dhici karta in la qoray ka hor. Wargeyskuna wuxuu soo xigtay in ilaa maanta la isticmaalo diiwaankaas.
– Maxaa sababay in boliisku ay diiwaangeliyaan qowmiyadda Roomerka? Waa wax cunsuriyad salka ku haysa. Waxaan ka argagaxay in carruurtaydu ay ku jiraan diiwaankaas boliiska, ayey boliiska u sheegtay Sandra Håkansson, oo qoyskeeda oo dhammi uu jiro diiwaanka.
Isha: Ekot & TT